Iimbono ezixhaphakileyo kwihlabathi le-anabolic steroids | I-AASraw
/Blog/Ithala/Iimbono ezixhaphakileyo kwihlabathi le-anabolic steroids
ezaposwa ngomhla 10 / 12 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Oku kuya kuba sisishwankathelo ngokubanzi ngokubanzi seenjongo zolwazi ngokubanzi kuphela, ayisiyo indlela yokukhokela. Oku akuthethi ukuba ndiyakuvumela ukusetyenziswa kwayo okanye ukwamkelwa kokusetyenziswa.
Rhoqo akuqondwa kakuhle okanye miscategoriser- kukho iintlobo ezahlukeneyo zeesoftware. IiCorticosteroids, ezineziphumo ebezingalindelekanga ezimbi kunezi Anabolic Steroids, ngenxa yesizathu esithile ayenziwa idemon yimithombo yeendaba kwaye ukusetyenziswa kwayo empeleni KUYAFUMANEKA kwiimeko ezininzi- kubandakanya ezemidlalo nezemidlalo. Zihlala zisetyenziselwa ukulwa nosulelo. Kukho iProgesterone esetyenziswa kwiindlela ezininzi zolawulo lokuzalwa kwaye ithathwa zizigidi zabasetyhini yonke imihla. Ianabolic steroids (apha ekubhekiswa kuyo njenge-AS okanye AS) zezinto abantu abaninzi abacinga ngazo xa besiva okokuqala “ii-steroid” kunye nazo zonke izinto ezimbi ezinxulunyaniswa nabo.
Wonke umntu uhlangabezana namacala ahlukeneyo. Akukho bantu babini bafana. Ukuthi BONKE abantu banokufumana into efanayo kuyahlekisa. Abanye abantu banobunzima obunzima bokuqonda oku njengoko kubonakala kwintambo ye-lambesis. Inye kuphela isiphumo esibonisa ukuba bonke abasebenzisi * abangamadoda * baqinisekisiwe- kwaye oko kukuthi testicular atrophy.
A) Amatyhalarha e-Testicular- xa ufaka ixabiso elikhulu le testosterone I-HPTA yomzimba wakho iqala ukuvala (iyeka ukuvelisa iTestosterone kuba umzimba wakho uphila ngakumbi kunokuba yanele); Ngamafutshane oku kubangela ukuba iibhola zakho zinciphe. Amaxesha amaninzi ayibonakali. Mhlawumbi ukunciphisa i-25%, i-50% ubukhulu becala. Nje ukuba uphume kumjikelezo, sebenzisa i-PCT yakho (Unyango lwasemva komjikelo) babuyela kubukhulu obugcweleyo. Ayisosigxina. Abanye abantu basebenzisa i-HCG (i-chorionic-gonadatropin) yabantu xa bejikeleza ukugcina iibhola zabo zikusayizi opheleleyo kwaye ikwanceda ekuvuseleleni kuba igcina iiseli zakho ze-leydig zisebenza.
B) Baldness / ukulahleka kweenwele: i-AS ayibangeli gazi okanye ulusu lweenwele. Nangona kunjalo, ingakhawulezisa inkqubo. Ukuba ulahleko lweenwele lubaleka kusapho lwakho, uya kumangaliswa kakhulu uya kuba ngumgqatswa wokukhawulezisa le nkqubo. UBill Roberts wabhala ngeentlobo ezimbini ezahlukeneyo zeSteroids- Uhlobo I kunye nohlobo II; Chwetheza I kuba yindlela ephambili njenge-Testosterone, iTren, iDecca, iSust, njl. Njl I-Winstrol (stanazolol), i-dbol, i-anavar, i-Masteron njl. Uninzi lwabantu lugxeka iziyobisi ezinjengeWinstrol kunye I-Masteron Enanthate (iDrostanolone) Njengonobangela wokulahleka kweenwele kwaye uzame ukuphepha ezo ziyobisi xa uxhalabile malunga ne-MPB, xa injalo ingelulo uhlobo olunesiphumo esibonakalayo kwi-MPB (indlela yempandla yamadoda) kunalo naluphi na olunye uhlobo lwamachiza. Kwaye ngokucacileyo iziyobisi ezisekwe kwi-DHT (njenge-deca) ziya kuba krakra eluswini lwakho. Eyona ndlela yokulwa le nto kukuthatha i-Finasteride (ipropecia / proscar) ezinye iintlobo zohlobo lwe-rogaine shampoos kunye nezinye izinto ezimbalwa.
C) Amachaphaza- abanye abantu baqhuma ebusweni babo; abanye abantu baphuka esifubeni okanye ngasemva ... kwaye ulusu lwabantu abanye luyaqaqamba. Kwakhona, wonke umntu uchaphazeleka ngendlela eyahlukileyo.
D) Ndivakalelwa ngathi oku kufanele ukuba kugutyungelwe phantsi kwe-testicular atrophy kwaye ndiba ngathi ndilibele. Amaxesha amaninzi ndisiva abantu bethetha nge-AS yenza i-dick yakho inciphe, xa eneneni bethetha iibhola zakho. Ke, ukucacisa, i-dick yakho ayiyehli kwaye oko kwenza malunga nengqondo enkulu njengokuthi ukuthatha ithiza lokucoca impumlo kuthoba impumlo yakho. Ukuba kukho nantoni na, enegazi elininzi elihamba kuloo ndawo ndingathi ungalulangazelela. Kwakhona kuxhomekeke kumdibaniso owathathayo- amanye amachiza afana ne-Deca kunye neTren anokuba rhabaxa kakhulu kwi-libido yakho (ngenxa yoko ibinzana, "deca-dick") kwaye abanye abafana bakhethe ukuthatha I-Tadalafil (Cialis) (171596-29-5) or viagra (awunyanzelekanga) kodwa ezinye iziyobisi ezifana novavanyo ngqo (naluphi na uhlobo) okanye i-dbol iya kukonyuka ezindongeni kwaye imbi nje …………… .. Inkoliso yamantombazana anomyeni okanye inkwenkwe kumjikelo ibonakala iyonwabela indoda yabo ekubeni kumjikelezo, lol.
E) "Unomsindo wengqumbo" -akukho into enjalo. Ilula njengaleyo. Ukuba ungumntu ongazinzanga, ewe, baya kukwenza ukuba ungazithembi. Kodwa emva koko kwakhona, uninzi lwezinye izinto kunye namayeza zinokubangela lonto. Ukuba unengqondo engazinzanga okanye ukonzakala ukuba uneengxaki zengqondo akufuneki uthathele ingqalelo ukuthatha ii-steroids. Ndinqwenela okufanayo kungathethwa ngotywala. Uninzi lwabantu aluchaphazeleki koku. Uninzi lwabantu luziva ngathi lukwimeko engcono okanye akukho kwahlukileyo konke konke. Ndiyababona abantu mhlawumbi befumana i-cockier kuba inkulu kakhulu kwaye bomelele kancinci, kodwa ngaphandle kwalonto, nayiphi na into ebika ukuba "yingqumbo-yovalo" (iziko likarhulumente okanye alikho) yihashe.
F) Ukufa / ukusilela kwezitho / njalo-njalo.
IiSteroids azibangeli ukuba abantu bafe okanye zikhokelele ekufeni kwabo ngenxa yempembelelo ezimbi. Akukhange kubekho zifundo zesayensi ezibonakalisa amakhonkco ngokuthe ngqo kwi-anabolic steroids kunye nokufa. Abantu bayakukhomba kwiZyzz, kodwa abayi kukhomba kwimbali yosapho yakhe yesifo sentliziyo / iimeko kwaye andicingi ukuba i-autopsy yakha yenziwa esidlangalaleni? Ukucaphula amanani e-CDC kwi-2005 kwi-Bigger Stronger Faster:
I-75,000 Abantu unyaka bafa ngenxa yotywala
Abantu be-435,000 ngonyaka babulawa yiCuba
kunye nokusweleka kwe-anabolic steroids ……: 3
Ingozi ye-steroids KUKUGQIBELA ngokugqithisileyo. Kuthelekiswa kakhulu imeko kunye nePitbulls. Abantu abangaphezulu ngonyaka bafa kukubethwa entlokweni ngama coconuts okanye ngokuwa ezitepsi.
Ewe, ukuba i-steroids yenziwa ngendlela engalunganga kunokuba yingozi. Ii-steroids zomlomo (ezinjenge-dbol, i-winstrol, i-anavar, njalo njalo) zinobungozi kakhulu kwisibindi sakho ukuba zithathwe kwimithamo ephezulu kakhulu kunye nexesha elide kakhulu ... kwaye ukuba kutyiwa utywala ngelixa kumjikelezo. Yiyo loo nto kucetyiswa ukuba kwenziwe iipaneli zegazi ngaphambi, ngexesha, nasemva komjikelo. Ukuthatha izinto ezifana nobisi thistle kunokukunceda ukunciphisa umthwalo kwisibindi sakho.
Uxinzelelo lwegazi luyakwazi kwaye luya kunyuka, kwakhona ngakumbi kuxhomekeke kumxube owuthathayo (ngakumbi I-Methandrostenolone (Dianabol) ipowder kunye ne-EQ). Ukuthatha irayisi ebomvu kunganceda ukugcina cholesterol kunye ne-BP. Ngokuqinisekileyo yinto efuna ukubekwa esweni. Kwaye ngokuqinisekileyo sisizathu sokuba ufanele ukutya i-CLEAN ngelixa umjikelezo- ungadli i-pizza, i-burger kunye ne-fries.
Ezinye izimvo eziphosakeleyo
Iiasteroid zithatha intramuscularly- hayi ngaphakathi. Akukho ukusonga bendi ngasengalweni yakho okanye nantoni na. Ukuba ubunokuthi ungene ngethambo okanye umthambo ophelayo unokufa. Kukho iindawo ezithile zokujova- eyona ndawo ikhuselekileyo yeyibhanti, i-quads, glutes, kunye nendawo ene-glroal gluteal. Abantu bahlala becinga ukuba i-esile / i-glutes yeyona ndawo ikhuselekileyo, ndingavuma kuba kunzima ukufikelela kuyo kwaye kuba nerve yengqondo ibaleka kufutshane nale ndawo kwaye ukuba uyibetha loo nto, ithamsanqa ngobomi bakho bonke.
Iiasteroid kwaye azisiyobisi esingumangaliso. Ungahlala emandlalweni kwaye utye iitapile zeetapile kwaye kunokwenzeka ukuba zikhule, kodwa ukuba yile nto uza kuyenza xa uyithatha, akufuneki nokuba ukhathaze ukuchitha imali yakho. Kusafuneka wenze umsebenzi. Kusafuneka nditye okucocekileyo- ndingathi ndicocekile. Kuya kufuneka ugcine iso kuyo yonke into.
I-Pro-hormones ayisiyongo-ekhuselekileyo kwezinye ii-steroids ekubeni ungazithenga kwi-GNC / Nutrition / Nesiphelo. Ziyingozi kakhulu kwaye zihlala zingenakuthenga amachiza e-PCT okwenyani kwaye ke ulungele eyona ndlela imbi yokwenyani- ukuba uyaphila kwakhona. Baninzi abantwana abaphelela kwi-TRT ubomi babo bonke ngenxa yoku. Andiqondi ukuba bekungekho mthetho apho emva kwetyala lokuchasene nezivenkile.
Ngaba i-MK-677 (Ibutamoren) isebenza kakuhle kulwakhiwo lweMisipha? Uphononongo lweSarm [2019 NTSHA]	Isikhokelo sokuthenga esipheleleyo se2019 sokwakha umzimba we-SARM SR9009